KETRIKA.COM Misy entana hatao lavanty manomboka anio
Hanao lavanty momba ireo karazan’entana maro samihafa ny www. Ketrika.com manomboka anio alakamisy 04 jolay na ilay antsoina hoe : « ventes aux enchères ».
Anisan’ny ho hita ao ny vata fahitalavitra Ecran Plat 32’; ny Whisky …. Ny Ketrika no mamaritra ny vidiny farany ambany raha azon’ireo mpandray anjara amin’ny lavanty atao kosa no manome tolo-bidy mampiakatra ny vidiny ao anatin’ny 10 minitra. Tapitra io fe-potoana io dia izay nanome tolo-bidy ambony indrindra no mahazo ilay entana. Tsiahivina fa vaovao ary tena izy avokoa ny entana ao amin’ny Ketrika. Miainga amin’ny vidiny mirary avokoa izy ireo. Ao anatin’ny tranonkala Ketrika.com ihany no hahafahana mandray anjara amin’ity lavanty ity fa tsy ho azo atao ny manome tolo-bidy any amin’ny tambajotram-pifandraisana Facebook na amin’ny alalan’ny antso an-tariby. Ampahatsiahivina isika fa misy “modules” maro ny tranonkala www.ketrika.com ka misy karazan-dalao toy ny “défis en ligne”sy “jeux sportifs” koa ao ankoatra ny “ventes au enchères” na ny lavanty. Mba ahafahana mandray anjara amin’ireo rehetra ireo dia tsy maintsy misoratra anarana. Maimaimpoana ny fisoratana anarana ao amin’ny tranonkala www.ketrika.com. Tsy maintsy manana “jetons” kosa vao afaka milalao ary amin’ny alalan’ny Mobile Money no ahafahana mividy “jetons”. Arahina avokoa ireo toromarika voasoratra izay efa nezahin’ny tompon’andraikina natao mazava tsara.